Buharị ga-ekwenyelata na Nhazigharị usoro ọchịchị Naịjiriya-Zopmal – hoo!haa!!
Buharị ga-ekwenyelata na Nhazigharị usoro ọchịchị Naịjiriya-Zopmal
Abụja: Mazị Ịmanuel Zopmal, Onye isi ndi ntorọbịa nke mpaghara Obinetiti Naịjiriya bụ Middle Belt Youth Council akatọọla ozi afọ ọhụrụ nke Onyeisi Muhammadu Buhari jiri kwuo na Ihazighari Usoro Ọchịchị Naịjiriya (Restructuring) adịghị mkpa.
Zopmal kwuru na Buharị ga ekwetalata maka Ihazigharị Usoro Ọchịchị Naịjiriya n’ihi na nke ahụ bụ ihe oke mkpa iji zọpụta ala a n’ime oke nsogbu ọ nọ n’ime ya.
“O nweghi ka Naịjiriya ga-esi nwee agamnihu ọbụla ma ọ bụrụ na enweghị Nhazigharị Usoro Ọchịchị nke ala a.”
Ọ sịkwa na Buharị gosiri onwe ya dịka onye ndu na anaghị ege ndi ọ na-edu ntị site n’ikwu udi okwu ahụ,” Ọ dị mwute na Buharị, dịka onye ndu na anaghị ege ntị, nọrọ n’ozi ahọ ọfụrụ ya were jụ Nhazigharị Usoro Ọchịchị ala a. O gosiri na ọ chọghị agamnihu nakwa ịdịnotu n’ala a”
Zopmal kọwakwara na mpaghara ndi ọzọ nile na Naịjiriya ajụla usoro ọchịchị nchigbu dị ugbua, ma ewezuga ndi Mgbago Ugwu.
“Mpaghara Naịjiriya nile ajụla usoro ọchịchị dị ugbua ma ewezuga ndi Mgbago Ugwu. Okwu Buharị atụghị anyị bụ ndi Obinetiti n’anya. O teela anyị ji asị ka ahazigharịa usoro ọchịchị ala a iji nye anyị mpaghara Obinetiti anyị chọwara kemgbe mana ndi ọchịchị nchigbu ndi Mgbago Ugwu ekweghị.”
“N’agbanyeghi ihe Buharị na-akọ, anyị agaghị ada mba n’ịlụ ọgụ iweghara mpaghara anyị”
“Onye ọbụla jụrụ Nhazigharị Usoro Ọchịchị ala a bụ onye iro Naịjiriya. Buharị enweghị ike ijinwu okwu ya were yijaa ndi Obinetiti, anyị agaghị eji ụjọ daara enwe n’elu”
Previous Post: ORIRI/ERIMERI/NRI
Next Post: MMIRI
Nkea bụ eziokwu
Mazi Ikechukwu Bismarck Oji